Xildhibaan Baarlamaanka Hortiisa Kaga Dhawaaqay Inuu Qabo Cudurka HIV AIDS-ka | Himilo Media Group
Xildhibaan Baarlamaanka Hortiisa Kaga Dhawaaqay Inuu Qabo Cudurka HIV AIDS-ka
London, 2 Dismeembar, 2018 (Himilo) – Mudane ka tirsan aqalka hoose ee baarlamaanka dalka Ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday inuu qabo cudurka HIV AIDS, xilli uu aqalka ka doodayay arrin ku saabsan caafimaadka dadweynaha.
Lloyd Russell-Moyle, oo ah xildhibaanka xisbiga shaqaalaha ee laga soo doortay degmada Brighton Kemptown, ayaa noqday mudanihii ugu horreeyay ee xaaladdiisa ku saabsan cudurka HIV-ga kaga dhawaaqa gudaha baarlamaanka hoose, wuxuuna noqday xildhibaankii labaad ee sheega inuu la nool yahay xanuunkaas.
Mr Russell-Moyle ayaa ku boorriyay wasiirrada iney dib u eegis ku sameeyaan go’aanka wax lagaga dhimayo miisaaniyadda loogu tala galay caafimaadka dhinaca galmada.
“Markii aan ogaanayay inaan xanuunkaas qabo waxay igu ahayd “argagax dhab ah” laakiin ma ayna ahayn dhammaadkii dunida, inkastoo dhowr ilbidhiqsi ay sidaas kula noqoneyso” ayuu yidhi Mr Russell-Moyle, oo 32 sano jir ah.
Xildhibaanka ayaa sidoo kale la hadlay dadka xanuunkiisa oo kale qaba “Ugu dambeyn waxaan rabay iney ii suurta gasho inaan halkan soo istaago una sheego dadka kale ee la nool HIV AIDS-ka in cudurkooda aanu astaan u ahayn”ayuu yidhi, waxaanu intaa sii raaciyey “Waxaan gaadhi karnaa heer walba oo aan dooneyno, dadka ka cabsanaya iney cudurka iska baadhaan iyagana waxaan leeyahay, waxaa habboon inaad la noolaato wax aad ogtahay intii aad la dhiman lahayd cabsi”.
Xildhibaankan ayaa sheegay in ku dhawaaqista arrintiisa uu doortay inuu ku soo beego maalinta Aids-ka adduunka oo ku asteysan 1-da Bisha 12-aad, 2018.